Vaovao - Fitaovam-piadiana mekanika mandeha ho azy
Fitaovam-piadiana mekanika mandeha ho azy
Tsy ela akory izay dia nanana mpikambana vaovao tao amin'ny atrikasa i Zhengchida, izay nitondra fahombiazana avo lenta sy kalitao tsara kokoa ho an'ireo vokatra. Izy ireo no fitaovam-piadiana mekanika mandeha ho azy.
Ny tetikasa fampandrosoana ny milina mandeha ho azy dia natomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2019. Nisy ekipa injeniera efa za-draharaha natsangana ho vondrona miasa ho an'ity tetikasa ity. Elaela ny ekipa nanao ny fikarohana sy ny fanadihadiana avy amina mpanamboatra milina sy fampirantiana milina maro. Ireo injeniera natokana dia nampifandray ny haitao mandroso sy ny fizotran'ny fanamboarana lobolika, ary nahomby tamin'ny farany izay ahazoana tombony sy tombony lehibe ho an'ny orinasa. mpiasa samihafa, toy ny milina Blanking, milina totohondry, milina manapaka na milina, milina mamorona sns. fa noho ny fanampian'ny Automatic Mechanical Arms, ireo dingana rehetra ireo dia azon'ny milina iray atao miaraka.
Tena revolisiona io. Mazava ho azy ny fandrosoana:
1. Fotoana kely. Nohafohy ny dingana maromaro mba ho dingana tsotra iray. Tsy ny ora fiasana ihany no nohafohezina, fa ny ora fitaterana hatrany amin'ny atrikasa iray hafa.
2.Mety hiasa kely. Amin'ny fomba taloha, mila mpiasa 3-4 izy hanamboatra lelany iray, raha mpiasa iray ihany izao no ampy, ary ny tokony hataony fotsiny dia ny mijery ny masinina hanaraha-maso ny fizotrany.
3. kalitao tsara kokoa. Ny asa mekanika mandeha ho azy dia manalavitra ny lesoka na ny fiviliana mety hateraky ny asa tanana. Mampisondrotra ny haavon'ny marina sy ny marina ary ny fahombiazany amin'ny fotoana ilaina.
Ny mekanisialy mandeha ho azy dia fironana amin'ny fampandrosoana ny indostria. Zhengchida dia hanaraka ny fironana, ary hitondra na hamorona milina teknika mandroso kokoa hanatsarana ny kalitao sy ny fanaraha-maso ny fizotrany.